More for More” August Promotion - Shwe Lamin Nagar Group of Companies
Shwe Lamin Nagar Group of Companies > Promotion > More for More” August Promotion
More for More” August Promotion
နွေရာသီမှာ နေပူတယ် မိုးရာသီမှာ မိုးရွာတယ်
လတိုင်း လတိုင်းမှာ Acer ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပရိုမိုးရှင်းတွေရှိတယ်..
ဒီလို ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ သဘာဝတရားက ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် မပြောင်းလဲဘဲရှိတာက Acer ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပရိုမိုးရှင်းဖြစ်ပါတယ်.. ဒီ သြဂုတ်လမှာလည်း “ More for More” ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့
ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျောင်းသုံး ၊ ရုံးသုံး၊ အိမ်သုံးအတွက် ရွေးချယ်သင့်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကောင်း Laptop ဖြစ်တဲ့
Aspire3Series နဲ့ Aspire5Series တွေဝယ်တာနဲ့ cash back $ 15 ကနေ $ 40 အထိခံစားခွင့်တွေပြန်ပေးသွားမှာပါ..
Aspire 3(A314) Celeron ၀ယ်ရင် cash back $ 15 ( အကယ်၍ Invoice တစ်စောင်ထဲဖြင့် ၂ လုံးဝယ်ပါက Total cash back $ 20) Aspire 3(A314) Pentium ၀ယ်ရင် cash back $ 15 Aspire 3(A315) i3 8th gen ၀ယ်ရင် cash back $ 30 Aspire 5(A514) i3 8th gen ၀ယ်ရင် cash back $ 40 Aspire 5(A515) i3 8th gen ၀ယ်ရင် cash back $ 30 ပရိုမိုးရှင်းကာလက သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့ ကနေ ၂၁ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာရှိတဲ့ Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd ရဲ့ Dealer/Reseller ဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
✴ Acer Products များကို Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd မှ မြန်မာပြည်တွင် တရားဝင် တင်သွင်းဖြန့်ချီပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ Computer ဆိုင်ကြီး ( Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd ၏ Partner Shops ) များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ✴
P.S : Customer များအနေဖြင့် Acer Product များ ဝယ်ယူလျင် ရွှေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီ ပစ္စည်း ဟုတ်မဟုတ် ( Company Seals ပါမပါ ) သေချာစီစစ်ပြီး ဝယ်ယူစေလိုပါသည်။
✔? ✔? Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd မှ တရားဝင် တင်သွင်းထားသော Product များအတွက်သာ Warranty ခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ( ဆင်တူယိုးမှား ✖️သတိပြုစေလိုပါသည် )
Acer Swift5(i5) (10th Gen)